Zixi: Mametraka mivantana amin'ny alàlan'ny IP mivantana ny fampitana mivantana amin'ny haino aman-jery - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster of NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Creation » Zixi: Manome am-pahombiazana ny fandefasana horonan-tsary mivantana amin'ny alàlan'ny IP
Zixi: Manome am-pahombiazana ny fandefasana horonan-tsary mivantana amin'ny alàlan'ny IP
Avy amin'i Tim Baldwin, Lehiben'ny vokatra, Zixi
Ny mpanjifa amin'izao fotoana izao dia maniry afa-po amin'ny atiny. Te handany votoaty amin'ny fotoana rehetra izy ireo, amin'ny fitaovana rehetra, atao amin'ny fomba manome fahafaham-po ny tombotsoany ary alefa amin'ny isa vidiny mora. Ny orinasam-baovao dia mahatsapa fa mila manamboatra fandaharam-potoana bebe kokoa mankany amin'ny toerana maro kokoa izy ireo, ary ny fizarana IP no fomba tsara indrindra hahatratrarana an'izany. Saingy rehefa mientana ao amin'ity sehatry fitaterana an-tariby ity ireo mpanjifa, ny loharanom-piasa sy ny fampiasana dia manomboka lasa sarotra be loatra amin'ny resaka famatsiana famatsiana, ary azo antoka fa ho lasa olana ny filaminana.
Zixi dia manampy ny tompona votoaty sy ny mpamatsy mandeha hamakivaky ireo rojo fitaterana vaovao vita amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fanomezana fahitana sy fitaterana votoaty azo antoka. Miaraka amin'ny haitao mandresy i Emmy, Zixi dia ivon'ny fotodrafitrasa fitaterana horonan-tsary mivantana an-tsary, manampy ireo mpanome votoaty hanolo lova horonantsary raikitra hatrany zanabolana ary ny fibre miaraka amina vahaolana mora kokoa, azo hakana aina ary azo antoka ary mahomby amin'ny fanaovana internet ho an'ny fanaparitahana horonantsary mivantana.
FAMPISEHOANA NY FIVAROTANA TSY MISY ATAO VOLA AZONY
Fantatsika fa ao amin'ny fiarovana ny indostrian'ny fahitalavitra no tena manahy indrindra, indrindra raha momba ny votoaty mivantana mivantana. Raha momba ny fitaterana renirano amin'ny IP, ny mpanome votoaty dia mila manana vahaolana ahafahan'izy ireo manara-maso ny fitaterana sy hiantohana ny fahitana am-pitandremana amam-pahatokiana amin'ny lafiny rehetra.
Mba hahafahan'ny mpaninjara hifindra amin'ny fizaram-paritany na teboka to-multi-to-point mankany amin'ny sehatry ny faran'ny asa feno sy ny sisa amin'ny IP ary miaraka amin'ny kalitaon'ny fampielezam-peo, i Zixi dia namorona fiaramanidina mifehy ny rahona ZEN Master. Miaraka amin'ny ZEN Master, Zixi dia manome vahaolana amin'ny fanaraha-maso sy ny fitantanana tambajotra izay ahafahan'ny mpanome votoaty an-dàlam-pandrefesana ny fizarana horonantsary amin'ny fahatokiana tanteraka ny kalitao sy ny fampisehoana. Ity rafitra fanaraha-maso masterisie ity dia ahafahan'ny mpanjifa mahita ny rojotra fitaterana fitaterana lahatsary manomboka amin'ny fahazoana mankany amin'ny sehatra CDN, MSO, MVPD, na OTT. Raha jerena amin'ity fomba farany ity amin'ny ZEN Master, ny mpanjifanay dia manamafy hatrany fa ny atiny amin'ny horonan-tsary dia alefa azo atokisana amin'ny fivoarana efa nokasaina.
TEKNOLOHY BEST-IN-KELY MBOLA TOKO FIVORIANA FIVORIANA
Ny protocols an'ny kilasy tsara indrindra an-kilasy misy an'i Zixi sy ny fiarovana miaro tena no anisan'ireo antony lehibe indrindra nisafidianan'ny mpanjifantsika sy ireo mpiara-miombona antoka azy handefa ny atiny amin'ny alàlan'ny sosona fitaterana ny Zixi Platform. Ny angon-drakitra rehetra ao amin'ny tambajotra Zixi-azo ampiasaina dia arovana amin'ny fomba fiasa marobe milahatra.
Ho an'ny fandraisana anjara mivantana sy fanaterana mivantana, mampiasa fomba fiarovana roa i Zixi ho fiarovana ny atiny. Ny fomba voalohany dia fanamafisana lakana static amin'ny alàlan'ny encryption AES-128 / 256. Miaraka amin'ity fomba ity, ny lakile dia tafiditra ao amin'ny fitaovana fandefasana sy fandraisana izany ary raha tratran'ny antoko fahatelo ny fonosana dia hodidiana sy tsy azo ampiharina izy ity - ity fomba ity dia manome ambaratonga fototra amin'ny fiarovana ao anaty renirano iray. Ny fomba fiarovana faharoa miaraka amin'i Zixi dia ny fampiasana ny Datagram Transport Layer Security (DTLS) eo anelanelan'ny fandefasana sy fandraisana izany. Ny DTLS dia manome ny fanaraha-maso tanteraka ny fivoriana ka tsy hidiran'ny renirano eo anelanelan'ny loharanom-baovao sy ny toerana haleha. Ny fampiasana mpisava lalana ny DTLS dia midika fa ny fandefasana horonantsary streaming amin'ny alàlan'ny fifanakalozana votoaty mivantana Zixi dia tsy mamela ny fanodikodinana, fanakorontanana na famelana hafatra ary harovana amin'ny famelezana olona-eo-afovoany (MITM). Ho fanampin'ny fanodinana angon-droa farany ka hatramin'ny farany dia mampiasa fepetra fiarovana bebe kokoa amin'ny zoron'ny fiaramanidina ZEN Master Control amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fidirana amin'ny fitantanana, ny zon'ny mpampiasa ary ny fomba ahafahan'ny olona miditra sy mivoaka ao anaty rafitra miaraka amin'ny kalitao Single Sign-On. (SSO) sy ny fanamafisana 2-factor.
Ny Piracy dia zava-dehibe indrindra amin'ny mpanjifanay raha resaka streaming amin'ny fanatanjahan-tena mivantana amin'ny haino aman-jery satria ny mpanjifa matetika te hahita fomba hijerena azy ireo maimaimpoana. Noho ny fipoahan'ny tranokala mivantana-tahaka toy ny YouTube Live, Twitch, sns, ireo tompona votoaty dia tsy maintsy miahiahy momba ny mpanjifa "mivantana mivantana" amin'ireto hetsika fandoavam-bola ireto ireo marobe. Manampy ny mpanjifanay i Zixi amin'ny fampitana am-pahatokiana ny votoatiny nokasaina hatao raha tsy misy fidiran'ny atiny ary mipoitra amin'ireo sehatra ireo.
Zixi indrindra dia miatrika ny ahiahy piraty amin'ny resaka fandefasana hetsika ara-panatanjahantena mivantana avy amin'ny modely aloa-karama fijery mahazatra. Ohatra, ny UFC, ny fikambanan'ny mpanakanto mifangaro amin'ny marimaritra iraisana eran-tany ary ny mpamatsy hetsika fijerena karama farany indrindra eto an-tany, dia manofa ny sehatra Zixi hamelana hetsika UFC mivantana. Mandritra ireo fotoam-bavaka lehibe sy kolontsaina mila fanandramana miaina ity, avo ny tombontsoa ho an'ny fanabeazana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny sehatra Zixi ho an'ny fitaterana horonan-tsary mivantana mandritra ny fotoana fohy, ny mpanjifantsika dia afaka mampiasa fizarana IP mba hahatratrarana ny mpihaino lehibe indrindra, ary matoky izy ireo amin'ny fahafantarana fa ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fiarovana dia miasa mba hiarovana ny renirano sy ny vola miditra.
Mba hiatrehana ny fanaovana piraty dia tsy maintsy mahatakatra ny loharano sy ny fomba fanaovana piraty ny indostria ary miezaka manelingelina azy ireo. Amin'izao fotoana izao, ny fanomezana sy ny famerenana ny votoatin'ny horonantsary dia arovan'i Zixi, amin'ny alàlan'ireo fomba voalaza etsy ambony, ary ny fanaterana farany ny atiny amin'ny horonantsary ho an'ny mpijery dia arovan'ny Conditional Access and Digital Rights Management, noho izany dia ny fandrahonana an-tsokosoko lehibe indrindra dia ny fisamborana sy ny fandraisam-peo ny horonantsary. votoaty ao amin'ny haavon'ny fitaovana mpijery. Ny fikatrohana ireo fitaovana sy ny rindrambaiko ao amin'ny fitaovana mpijery dia ahafahana mirakitra an-tsoratra sy mizara izany atiny izany. Ny vahaolana iray mety hitranga amin'ny fandrahonana toa ity dia ny mari-drano; Ireo tompona votoaty dia afaka manampy tsipika tsy hita maso ao amin'ilay horonan-tsary ary mampiasa rafitra automatique hahitanao ireo renirano mivantana ao amin'ny Internet ary hamotopototra azy ireo ho an'ny mari-drano ity. Raha vao hita ny votoatin'ny horonantsary tsy ara-dalàna dia afaka miara-miasa amin'ny serivisy streaming ny tompona votoaty.
fampitana injeniera fampitana Engineering CES2017 Cobalt Encoder fandraisana anjara Control System Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor MStar OTT SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 TVU Networks Video injeniera	2019-08-06
Previous: Trenan'ny teknolojia: fitahirizana / MAM
Next: Mpiara-miasa amin'ny MOG miaraka amin'ny LineUp ao amin'ny SET EXPO 2019